Bitcoin Hardforks kuyini? - Blockchain Izindaba
Januwari 11, 2018 admin
Bitcoin Hardforks kuyini?
Inethiwekhi Bitcoin Useke wadlula eziningi izimfoloko kusukela obhekwe lokhu cryptocurrency e 2008. Lezi izimfoloko okwakulindeleke ukusiza onjiniyela ukuba uxazulule izinkinga ezifana scalability, umthamo eliphansi TPS (kuthengiselana ngomzuzwana), elinganiselwe usayizi block, futhi ngokuvamile lula Bitcoin inethiwekhi overload. Nge bitcoin kokuba isofthiwe yomthombo ovulekile, noma yimuphi umsebenzisi kunethiwekhi Ungakopisha, guqula, futhi ukwethula imithetho yabo ikhodi. Ngakho, noma yimuphi umsebenzisi angakha yezifiso entsha namaketanga ezibhekwa ukuba izimfoloko, hardforks okungukuthi ezithambile noma inethiwekhi.
Softfork ushintsho esethola e protocol blockchain ukuthi akuvimbeli ISIZINDA of a chain omusha kusuka ngokuxhumana ISIZINDA yochungechunge ubudala. The best softfork isibonelo kuhlukaniswa Wayengufakazi Noma SegWit. abasebenzisi Network baye isebenze le softfork ngo-August ukuze nokwandisa isakhiwo block ukuthengiselana ukuze lalingahlanganisa kancane inkumbulo isikhala. I softfork ezivumelekile amabhlogo ukubamba ukwaziswa okwengeziwe ngaphandle kokushintsha umsebenzi inethiwekhi Bitcoin.
Hardfork kuyinto entsha inethiwekhi uchungechunge eyakheka lapho imithetho emisha babe kungavumelani ubudala olandelwayo blockchain. Esimweni esinjalo, ISIZINDA we amanethiwekhi amasha namadala ngeke bakwazi “ukuxhumana,” kusukela hardfork kusho ekushintsheni ukuvumelana indlela uqobo. Ngosizo hardforks, abasebenzisi inethiwekhi azame ukuxazulula izinkinga ayisihluthulelo inethiwekhi Bitcoin ezifana ongaphakeme lenethiwekhi evumela ukucubungula kuze kube ukuthengiselana eziyisikhombisa ngesekhondi futhi kulinganiselwe usayizi block, mayelana nokuthi zinengi, kufanele nibe ezingaphezu kuka 1 Wedatha. Hardforks futhi uvumele abasebenzisi ukudala cryptocurrencies entsha, njengoba izindlela zokwelapha ezihlukile kunokumpompela Bitcoin.
hardforks Odlule Imiphumela
Bitcoin XT ungowokuqala Bitcoin inethiwekhi hardfork, owawusedolobheni ngo-August ka 2015. I hardfork, ogxile ikhodi yomthombo Bitcoin Core, obekumele ukwandisa usayizi block 8 MB, ngaleyo ndlela kwande bandwidth inethiwekhi kuze kufinyelele 24 ukuthengiselana ngomzuzwana, kodwa cryptocurrency Ayisebenzanga ukuthola ukuxhaswa okudingekayo ezivela emphakathini yezimayini. Ukuqalisa Bitcoin XT ke edingekayo 75% wabo bonke abavukuzi inethiwekhi Bitcoin ukungena kwinethiwekhi, kodwa kuphela 12% wabo wasekela hardfork. Mayelana nalokhu, omunye Onjiniyela main Mike Hearn ithengiswe cryptocurrencies wakhe washiya kwiphrojekthi 2016. Ngenxa yalokho, kuphela 20 ISIZINDA basala kakhulu kulokho eqale iyikho 4,000 amayunithi, okwakwenza inethiwekhi ayitholakali ngaleso sikhathi.
Bitcoin hardfork Unlimited wethulwa ukuze ushintshe usayizi block ngoMeyi 2016, lapho abavukuzi abangu ezihlongozwayo ukukhetha ubukhulu Ngokuzayo inethiwekhi block. Ngokusho abavukuzi, ekwandiseni usayizi block ngeke aqede kuphela kulayini kodwa futhi ngcono inzuzo yabo ngokwandisa inani ikhomishini izimali e block. Kodwa hardforks baxgeki, iningi labo kwakungebona Onjiniyela, waphawula ukuthi lelisu kungase kwandise kungenzeka ukuthi amachibi amakhulu eyodwa yabavukuzi owawuyoqala ngaso ukulawula ukuthuthukiswa inethiwekhi.
Lokhu kwakusho ukuthi abavukuzi linendawo hardware amakhono ngeke bakwazi ubambe iqhaza elibonakalayo ekuthuthukisweni enethiwekhi ngokuhamba kwesikhathi yayiyobizwa lwaludlula ngokuphelele. Ngakho, inethiwekhi yayiyoba eyodwa emadamini eziningana. Ochwepheshe bathola amaphutha eziningana Bitcoin isofthiwe Unlimited, okuyinto yokuqala ngo-Ephreli bese ngoMeyi walo nyaka kwaholela ukuwa 70% ka ISIZINDA e inethiwekhi, kanjalo kuthiya mfihlo ukwethembana umphakathi zale izimfoloko.
Bitcoin Classic iphrojekthi wethulwa ukubhekana Bitcoin inethiwekhi izinkinga scalability, elalingakaze ixazululwe by Bitcoin XT hardfork. Umgomo lo msebenzi waba ukwandisa usayizi block 2 MB abese 4 MB. Kodwa lokhu hardfork Ayisebenzanga ukuthola ukuxhaswa okudingekayo omphakathi mfihlo. Ngesikhathi kakhulu ekuqaleni ezingaphezu kuka 2,000 ISIZINDA wathatha ingxenye in the project,” kodwa isibalo lehla 100 ngu 2017. Ngo-November kwamenyezelwa ukuthi iphrojekthi iyavalwa ngemva SegWit2X wawuhoxisiwe nabasunguli yephrojekthi kwase obala asekelwe Bitcoin Cash, the cryptocurrency entsha.
Cishe Bitcoin Cash iyona edume kunayo futhi kuphumelele Bitcoin inethiwekhi hardfork. Ngenxa ngenkani hardfork protocol, Bitcoin Cash uvele on block 478,558 ku 1 Agasti. Njengengxenye ekuphambukeni, usayizi block lenyuka lisuka kwabangaba 1 MB 8 MB, futhi lokhu, esikhundleni salokho, anda umthamo inethiwekhi futhi yehlise kufakelwa. Ngemva hardfork, Bitcoin abanikazi kwadingeka isamba alinganayo Bitcoin Cash in zabo e-wallets. Inethiwekhi entsha uye walungiselela indlela evikela evela kokwenziwe okuhambisanayo e blockchains ezimbili. Namuhla, 13 Disemba, Bitcoin Cash exchange rate kuyinto $1,616.84 futhi okwamanje wabeka ingxenye yesithathu yi-ofeleba cryptomarket.
Bitcoin Igolide cryptocurrency wabonakala ku-24 Okthoba ngenxa hardfork block 491,407 eyenziwa izimayini ngokuqinile Lightning ASIC e-Hong Kong. Umgomo msebenzi ube lwemali ikhange nakakhulu wabavukuzi non-professional ngaphandle bitcoin yasekuqaleni. Mayelana nalokhu, inombolo enkulu yabasebenzisi inethiwekhi kungaba kwesami Bitcoin Gold futhi isiqubulo cryptocurrency kuyinto “ukwenza bitcoin usabalalise futhi.” Esikhundleni elidala Ubufakazi-of-Work olandelwayo hardfork ezintweni ukusebenzisa entsha, Equihash. Lokhu algorithm ezwela usayizi okungahleliwe ukufinyelela inkumbulo (RAM) futhi liyasetshenziswa uma yezimayini cryptocurrency Zcash. Namuhla, 13 Disemba, Bitcoin Igolide exchange rate kuyinto $276.88 futhi emakethe ofeleba ingaphezu $4.5 bhiliyoni.
Bitcoin Diamond iyona hardfork, okwakulungiswa ekupheleni kukaNovemba block 495,866. abavukuzi Bitcoin Diamond ukudala lemabhuloki algorithm entsha ubufakazi umsebenzi (Pow). Futhi, lokhu cryptocurrency ihlukile owokuqala kakhulu izikhathi eziyishumi ukwandisa emqulwini kwekhabhoni kanye nosayizi block 8 MB. Onjiniyela bakholelwa ukuthi lo hardfork kuhloswe ukuba uxazulule izinkinga ezifana yokuntuleka Ukuvikelwa yobumfihlo, kancane kuthengiselana isiqinisekiso, futhi embundwini eliphezulu abahlanganyeli entsha ukungena kwinethiwekhi. Ukwakha Bitcoin Diamond izimayini inethiwekhi, e-isikhwama, ISIZINDA ikhodi, ne-API, kanye ukwengeza ikhodi yomthombo ovulekile on GitHub sihlelelwe ekupheleni konyaka.
Super Bitcoin, a cryptocurrency entsha, uvele on 12 Disemba, njengoba umphumela we-ukuhlukana inethiwekhi Bitcoin block 498,888. I Super Bitcoin IsiQubulo “ukwenza Bitcoin enkulu futhi.” Kuyaphawuleka ukuthi esikhundleni ICO bendabuko le platform sisebenzisa indlela entsha edonsa ukutshalwa, ngokuthi Iminikelo Fork kokuqala (IFO). I hardfork inikeza iyunithi ukwandisa kuze kufinyelele 8 MB. Inethiwekhi isebenzisa ubuchwepheshe Lightning Network oluyokwenza kokuqhuba esingenamkhawulo ukuthi micropayments. Ngaphezu kwalokho, inethiwekhi Super Bitcoin iyasebenza izinkontileka smart. Onjiniyela inothi, Nokho, ukuthi ekuphambukeni senzelwe ekubonile izifiso mfihlo umphakathi futhi kuba kunalokho ukuhlolwa.
Umbani Bitcoin - the division inethiwekhi mhlawumbe kwenzeke 23 Disemba block 499,999. I Onjiniyela of the inethiwekhi entsha ufuna ukuhlanganisa izimfanelo best of bitcoin futhi ethereum. Ngakho, ubuchwepheshe Lightning Network sizophinda sisetshenziswe esikhathini inethiwekhi entsha sokufeza micropayments kanye DPOS entsha (Ubufakazi Esigxotsheni Amanxusa) indlela kuzosetshenziswa ukuvumelana. Ukuze kwandiswe iyunithi kuze kufinyelele 2 MB, okuzokwenza ukwandisa isivinini kuthengiselana futhi kungalindelwa ukuthi inethiwekhi uyokusekela izinkontileka smart. Inethiwekhi uyophinde ube ngesivinini anda indalo entsha block okuzokwenza kuthathe 3 imizuzwana. Nakuba hardfork ayisekeli SegWit, ke asivikele ukuthengiselana okuphindaphindiwe. Nokho, kuyafaneleka ukuthi naphezu esondela kwethulwa usuku, iphrojekthi has namanje ukusetha i-website ukusebenza.
Bitcoin hardfork Okuhle, iqalwa Chinese cryptocurrency zimali Chandler Guo, okuzokwenzeka block 501,225, ku 25 Disemba. Usomabhizinisi ukuthi pre-izimayini kwakungeke kwenzeke, ngenkathi ivolumu ekushayweni bekungaba 21 abayizigidi ezingu-NKULUNKULU. Eziningana isitokwe Ukuhwebelana kakade ukuqinisekisile ukuthi ngeke isebenze ne cryptocurrency entsha, okuzokwenza ukuthi wayenesiphiwo ukuba Bitcoin abanikazi esikhungweni isilinganiso esisodwa komunye.
Bitcoin Platinum yethulwa njengoba Bitcoin inethiwekhi hardfork, okuyinto obekumele kwenzeke ku block 498,577 bese udala cryptocurrency entsha. Nokho, njengoba Cointelegraph ibika, the hardfork ingumkhonyovu wadala umfana waseNingizimu Korea, kanye nemali ngokwako ikhophi egcwele ikhodi Bitcoin Cash.
WabaSunguli ka ZenCash, Rob Viglione ukholelwa ukuthi izimfoloko kukhona isinyathelo ezanele yentuthuko blockchain:
Imisebenzi ye-Open- simiso semvelo zenzelwe ziphenduke, ukuthi lokho ngokusebenzisa e-project ngcono noma izimfoloko lapho sonke isisekelo ikhodi iya ku-isiqondiso akuhambisani. Evolution kuyinqubo zingcolile, ngakho-ke akusho ngaso sonke isikhathi eniyokwenza kuphumelele kahle, kodwa ngezinye izikhathi yilokho kuphela indlela ukuba ngempumelelo enkulu.
Umthuthukisi eziholayo blockchain e Sweetbridge, Bob Summerville ukholelwa ukuthi izimfoloko zinhle ngoba avumela amalungu ukunquma ukuthi inethiwekhi kufanele athuthukise:
Sekube iminyaka yokwesaba, ukungaqiniseki, nokungabaza emphakathini Bitcoin mayelana Ubungozi izimfoloko kanzima. Kusobala kimi ukuthi iningi ukuthi umsindo ibilokhu ivela amaqembu ukuthi umusa ukuphoqelela nokulinganiselwa ukucwaninga phezu izimakethe khulula futhi ilungelo secede.
Ayikho into efana 'ekuphambukeni ezimbi.' Awunalo ukuze bajabule iqembu elilodwa noma ezinye. Zokucwaninga kanye nokuncintisana zinhle. Ake emakethe anqume futhi bahlanganyele lapho ubona ukubaluleka.
eyigugu kakhulu yokufunda kwami ​​kusukela Eth / NJLL yokuhlukanisa kwaba ukuthi uphakathi kwabambalwa abamkhonzayo ngamaketanga eziba kulezi zindawo zenza. Uma umphakathi mfihlo has umehluko ezingahlangani, ke ungaya izindlela zakho ahlukene, nokuthi nje emihle. Uthola isehlukaniso futhi kokubili aqhubeke nokuphila yakho, kunokuba abahlala ndawonye usizi phakade, njalo ingxabano. "
Kodwa Umqondisi LOOMIA, uSawule Lederer unephuzu okuphambene ngokuphelele umbono:
"Yokumatisa emakethe nge izinguqulo ezihlukene Bitcoin kuyadida kubasebenzisi nokuthi kube discredits isimangalo ukuthi kukhona inani elilinganiselwe Bitcoins-kusukela ungahlala ibhaxa futhi kabili supply,"Kuphawula Lederer. "Yini enzima kakhulu wukuthi lezi spin-kwezitshalo ivele kusuka squabble ziqhathaniswa nezinye emphakathini Bitcoin sendlela yokusingatha ukungaboni ngaso umkhawulo usayizi block. Esikhundleni eza isivumelwano, umphakathi, Onjiniyela, nekhodi kuthiwa aphuke phakathi kwamaqembu ahlukene. "
Ukwethulwa LitePay akazange athathe indawo ngosuku esimisiwe
Ukwethulwa pa ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 11 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 12 Januwari 2018